MBTI Personality Test • Toe Tet
Today Promotion = 19,000 Ks
လူမှန်၊ နေရာမှန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ဖို့ ကမ္ဘာ့ company ကြီးတွေမှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ MBTI Personality Assessment ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ မိမိရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ အများစုဟာ မိမိအားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကို မဆန်းစစ်မိပဲ နေတတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းရွေးချယ်တဲ့နေရာ သို့မဟုတ် လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ထင်ထားတာလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရှိ Aristole က မိမိကိုယ်ကိုသိရှိနားလည်းခြင်းသည် ပညာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Personality Test တွေ၊ အသုံးချစိတ်ပညာနဲ့ Social Psychology ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် MBTI နှင့် Flow Consultant တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အလောက် Wealth Dynamics ကို အသုံးပြုပြီး သင်တန်းသားများကို မိမိရဲ့ Profile နှင့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များသိရှိအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
Singapore အစိုးရနေရာချထားရေးမှာ Peronality test လုပ်ပြီးမှ နေရာချထားရေးလုပ်တယ်လို့ Lee Kuan Yew တို့ကိုယ်တိုင် ပြောကြားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေက Manager တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူမှန်၊ နေရာမှန် နေရာချထားချင်တယ်ဆိုရင် MBTI က များစွာအထောက်အကူပြုမှာပါ။
ဒီ Online Program လေးကတော့ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်လိုသူများ၊ Psycho-analysis အခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် MBTI Personal Assessment ကိုအသုံးပြုပြီး တခြားမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီပေးလိုသူများအတွက် စီစဉ်ထားပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
1. HR Professional များ
2. Marketing Professional များ
3. Manager များ
4. စိတ်ပညာကို စိတ်ဝင်စားသူများ
5. မိမိရဲ့ career လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ အထောက်အကူပြုလိုသူများ
1. MBTI History
3. Sensing Vs Intuition
5. Judging Vs Perception
6. MBTI Personality Assessment
7. Profile explanation
I interest psycology
Today Promotion 19,000 Ks
001 MBTI Personality
002 MBTI Personality 2
003 Personality MBTI 3
004 MBTI Personality Test 4
005 Personality Test MBTI 5
006 Personality Test MBTI 6
007 MBTI Personality Test 7
008 MBTI Personality Test 8
009 ENFJ P9
010 ENTJ p10
011 esfj p11
012 esfp p12
013 ESTJ p13
014 ESTP p14
015 INFJ p15
016 ENFP P16
017 ENTP p17
018 INFP P18
019 INTJ P19
020 INTP p20
021 ISFJ p21
022 ISFP P22
023 ISTJ P23
024 ISTP P24
025 Conclusion MBTI